सुनचाँदी आज कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
Homeसमाचारसुनचाँदी आज कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
September 13, 2020 admin समाचार 13882
साताको पहि’लो दिन आइ’तबार सुनको मूल्य तो’लामा ९६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारो’बार भएको छ ।
साताको कारोबा’रको अन्तिम दिन शुक्रबार समेत छापा’वाल सुनको मूल्य ९६ हजार ५०० रहेकोमा आइ’तबार मूल्य स्थिर रहेको हो ।
यस्तै तेजावी सुन पनि शुक्र’बारकै मूल्य ९६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी’को मूल्य पनि स्थिर रहँदै आइ’तबार तोलामा १३१० रुपैयाँमा कारो’बार भएको नेपाल सुन’चाँदी व्यव’सायी महासंघले जनाएको छ ।
कुलमान घिसिङको आजबाट बिदाई..
नेपालमा आज कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्….
टिकटक बनाउने क्रममा, भीरबाट खसेर एक जनाको मृ’त्यु
May 8, 2021 admin समाचार 6016
टिकटक नेपालमा त्यति नै चर्चित र लोक’प्रिय छ, जति फेसबुक । टिकटकको यो लो’कप्रियता झन् बढ्दो छ । ‘लकडाउन’ले घरभित्रै रहँदा धेरै इन्टरनेट प्रयो’गकर्ताका लागि टिकटक समय गुजार्ने रमाइलो माध्यम पनि बन्यो । यसको लोकप्रियता
म्यादी प्रहरीलाई तालिम दिएर विभिन्न क्षेत्र जागिर लगाइने
May 29, 2022 admin समाचार 2810
सरकारले म्यादी प्रहरीको रुपमा काम गरेकाहरुलाई सञ्चित प्रहरी बलका रूपमा राख्ने बताएको छ । अर्थम€न्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणका क्रममा चुनाव सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रह`रीलाई तालिमसमेत दिएर विभिन्न क्षेत्रका काममा प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो
विश्वविद्यालयभित्र युवतीले युवकलाई सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव राख्दा दुबै निष्कासितः भन्छन्, “हामीले के गलत गर्यौं”
March 14, 2021 admin समाचार 6341
पाकिस्तानको ला’हौर विश्वविद्यालयबाट दुई विद्यार्थीलाई सा’र्वजनिक रुपमा प्रेम प्रस्ताव राखेको भन्दै निष्का’सित गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा पढ्ने एक युवतीले सबैको अगा’डि युवकलाई फूल दिएको र उनलाई अँगालो हालेकी थिइन् । विश्वविद्यालयका थुप्रै विद्यार्थीको अ’घिल्तिर यस्तो
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243664)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231226)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (230950)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (229265)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (229188)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228201)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228075)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227588)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (197249)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195556)